OMG सोच्नै गरि सुनको मुल्यमा भारि गिरावट( आखिर के कारणले सस्तो भयो सुन) – Enepali Samchar
OMG सोच्नै गरि सुनको मुल्यमा भारि गिरावट( आखिर के कारणले सस्तो भयो सुन)
June 8, 2021 June 8, 2021 adminLeaveaComment on OMG सोच्नै गरि सुनको मुल्यमा भारि गिरावट( आखिर के कारणले सस्तो भयो सुन)
e nepalisamchaar// काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ३०० रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य आज प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेर ९४ हजार १०० रुपैयाँमा पुगेको हो । आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
चाँदीको मूल्य भने गत मंगलबारको मूल्य कायम हुँदै प्रतितोला एक हजार ३५५ रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाले जनाएको छ।
र यो पनि : ६ जेठमा सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दियो। उनीहरू पदमुक्त भए। तर, उनीहरू विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको किनारा लागिसकेको छैन। यसैबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सामेल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। यससँगै माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सातै माओवादी नेता मन्त्री हुने सम्भावना क्षीण भएको छ।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो राजनीतिक सुझाव रह्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। मुख्यतः चासो छैन भन्ने होइन, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नै हामीलाई रोक्यो।
हाम्रो व्यक्तिगत कुराकानी भएको छैन। हामी व्यक्तिगत रूपमा त्यति इच्छुक पनि छैनौं। सर्वोच्चको निर्णयपछि गर्दा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको इम्प्रेसन राम्रो हुनेथियो भन्ने हाम्रो लजिक छ। दोस्रो चाहिं यो वामपन्थीहरूको जनमत हो। वामपन्थीहरूलाई अलिकति सुदृढ गर्ने कुरा गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सुझाव थियो हाम्रो। एउटा सर्वोच्चको मुद्दाको विषय हो, अर्को राजनीतिक अवस्थामा हतारिनुहुन्न भन्ने छ।
यसलाई हामीले त्यति ठूलो विषय बनाएका छैनौं। त्यो बेलामा एउटा क्रिटिकल अवस्था थियो, हामीले केपी कमरेडलाई समर्थन गर्‍यौं। अवस्था अलिक फरक भयो। सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँलाई हामीले अहिले नेतृत्व मानिसकेपछि अब भागबण्डा हुनुपर्छ भन्ने चाहिं हाम्रो धारणा छैन।
त्यो त चाहियो। यो नेतृत्वले सोच्ने विषय हो। नेतृत्वले कति दूरदर्शी भएर रणनीतिक हिसाबले सोच्छ, कति राजनीतिक रूपमा सोच्छ त्यो नेतृत्वको विषय भयो। तर हाम्रो माग के हो भने वामपन्थी आन्दोलन कमजोर नहोस् र नयाँ खालको ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ भन्ने हो।
हामीले २ जेठ २०७५ मा नै तपाईंहरूको कुरा मिल्छ भने तपाईंहरू मिलाउनुस् भनेका छौं। बरु अहिले हामी बाहिर बस्न तयार छौं। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई माधव कमरेडहरूलाई कसरी मिलाउने हो, त्यो तपाईंहरूको आन्तरिक कुरा हो भनेका छौं।
हाम्रो कारणले अथवा पूर्व माओवादी आए त्यसकारण हामी आउन पाएनौं भन्नुभयो भने त्यो माधव कमरेडको पनि दृष्टिदोष हुन्छ। अहिले भन्दा २० दिन अगाडि नै हामीले हामी बाधक हुँदैनौं भनेका छौं। २ जेठ २०७५ मा आउने भए आउनुस् र तपाईंहरूको भित्री समस्या के छ हल गर्नुस् भनेका छौं। २ जेठ २०७५ मा फर्कन हामी बाधक हुँदैनौं भनेर टोपबहादुरजीले १५-२० दिन पहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो। हामी दुई–चार महीना नै बाहिर बस्न तयार छौं।
नेकपा फुट्यो, नेकपा फुट्दा हामीले पहिलो अध्यक्षलाई समर्थन गरेका हौं। एमाले र माओवादीको अस्तित्व सिर्जना गर्ने काम अदालतले गर्‍यो। राजनीतिक निर्णय के हो भने नेकपा बन्यो र नेकपा फुटेको हो। त्यसैले हामीले पहिलो अध्यक्षलाई समर्थन गरेको हो।
अहिले जुन जनमत आएको छ, त्यो नेकपाको जनमत हो। अहिलेको हाम्रो उद्देश्य वामपन्थी सरकार बचाउने हो र त्यसलाई जोगाउन दक्षिणपन्धीहरूको पनि सहयोग लिनुपर्छ। तर वामपन्थीहरूलाई नै बलियो नबनाई वामपन्थी सरकार स्थायी चाहिं हुँदैन। तर रणनीति साझेदार को हुन् र कार्यनीति साझेदार को हुन् भन्ने चाहिं स्पष्ट हुनुपर्छ।
त्यसमा हाम्रो कुनै पनि खालको अब्जेक्सन हुन्न। हामी बाहिर नै बस्न तयार छौं । उहाँहरूको एकतामा हामी बाधक बन्दैनौं।
तपाईंहरू केपी ओलीसँग नै रहने हो, त्यसमा दायाँ-बायाँ हुँदैन ?
अहिलेको समकालीन नेताहरूमा अलिकति राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र बलियो नेताको रूपमा केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यो लेबलको अरू नेता छैन, उहाँलाई बचाउनुपर्छ। उहाँलाई हाम्रो समर्थनमा दायाँ-बायाँ हुँदैन।
अहिले त्यस खालको अवस्था छैन। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू गुटहरूको महासंघ जस्तो छ। यहाँ जता पनि गुटहरू छन्। गुटहरू विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रसँग जोडिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले काम गर्ने शैली नमिल्न सक्छ।
हामी माओवादीहरू आन्दोलनबाट आएका हौं, एमालेका साथीहरू लामो संसदीय प्रणाली पार गरेर आएका हुन्। संसदीय प्रणाली धेरै नबुझेका हामी माओवादी छौं। हामीलाई संसदीय प्रणालीप्रति आसक्ति छैन, एमालेलाई संसदीय प्रणाली नै युनिभर्सल हो भन्ने छ। यहाँ काम गर्ने मामिलामा केलाई प्राथमिकता दिने, केलाई गौण मान्ने भन्ने विषयमा केही मतान्तरहरू हुनसक्छन्। तर समकालीन नेताहरूको तुलनामा केपी ओलीले नै सबैलाई जोगाएर लैजान सक्छन्।
यो हामीले भन्दै आएका छौं। नेपालका सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता खोजिनुपर्छ। नेपालका वामपन्थी जनताको रक्षा गर्न सकेनौं भने भारतको पश्चिम बंगालको दिशामा जान्छ। पार्टी र नेताको स्वार्थ भन्दा पनि जनमतलाई बलियो बनाउनुपर्छ। ( जनादेशखबरबाट )
आज देखि गाउँ जानेको घुईचो, लकडाउन झनै खुकुलो, बिदेशबाट आउने लाई यस्तो गरिदै (हेर्नुहोस भिडियो)
यकाबिहानै आयो खुसी को खबर कुलमानको पुन: नियुक्ती ? विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्याे यस्तो विज्ञप्ती !